Dowladda Somaliya oo beenisay dhul dan guud ah inay ku wareejisay Midowga Yurub – STAR FM SOMALIA
Dowladda Somaliya oo beenisay dhul dan guud ah inay ku wareejisay Midowga Yurub
Dowladda Somaliya ayaa meesha ka saartay wararka sheegaya in dhul dan guud ah Dowladda ay ku wareejisay Ururka Midowga Yurub oo ka mid ah Xubnaha taageera Somaliya.
Wasiirka Howlaha Guud iyo Dib u dhiska Eng. Saalax Cismaan ayaa u sheegay Warbaahinta Dowladda Somaliya inaysan bixin dhul dan guud ah oo lagu wareejiyay Midowga Yurub, isaga oo intaasi hadalkiisa ku daray in arimahaasi ay yihiin wax been abuur ah.
Wasiirka ayaa sheegay dhulka danta guud in lagu bixiyo kaliya qodobo sharci ah, sida in Dowladda ay ka dhigato Xarun ciidan, Isbitaal ama Iskuul wixii intaasi ka baxsana aanan lagu bixin dhulka danta guud.
“Wax Midowga Yurub la siiyay ma jirto wax alaale wixii dan guud ah oo loo isticmaali karo ayaa loo isticmaalaa laakiin waxaad sheegeysid meel ay ku qoran yihiin iyo meel ay ku yaalaan ma jiraan waa kutiri ku teyn, Saxaafadda waxa ay rabaan ha qoraan, laakiin Dowladda hadii ay bixinayso wax dan guud ah, waxaa loo isticmaalayaa Millateri ama Iskuul, wixii intaasi ka baxsan ma jiraan.” Ayuu yiri Wasiirka Howlaha Guud.
Wasiir Saalax ayaa sidoo kale beeniyay haba yaraate inaysan jirin dhul dan guud ah oo la siiyay shaqsiyaad Muqdisho ku sugan oo si gaar ah u isticmaalo, waxaana uu sheegay qof waliba oo dhul dan guud ah si gaar ah u isticmaala in laga bur burinaayo.
“Sharciga qof ka sareyn kara malahan qof shaqsi ah oo dan gaar ah loo siiyay malahan, qofkii dhista dan guudna waa laga bur burinayaa, dan guud wixii ah gooni waaye oo Dowladda ay u garato in Isbitaal ama Iskuul in laga dhiso ah.”
Wasaarada Howlaha guud ayuu sheegay inuu isaga madax ka yahay uusana la socon wararka sheegaya dhul Dan guud ah in lagu wareejiyay shaqsiyaad.
Ka sokoow hadalka Wasiir Eng. Saalax, waxaa jira dhul badan oo Dan guud ah oo Dowladda Federalka Somaliya ay ku wareejisay shaqsiyaad gaar ah, waxaana laga dhigtay goobo ganacsi oo si gaar ah loo isticmaalo.
Musharrax C/raxmaan C/shakuur oo gaaray degmada Dhuusa Mareeb
Itoobiya oo bedeshay hogaanka ciidamada ka joogga Somaliya (Daawo Sawiradda)